Kuti kuchengetedza ndapota kuzodana
zvoseNK1-Non Smoking KingNQ1-Non Smoking QueenNQQ-Non Smoking Double Queen
Places To Idya
CHII nokusingaperi chamungaita, itai IT
Zvakanaka. AZVO zvokuti
Kana vanhu vachiona ZVAUNGAITA IT
VAKARATIDZA achada kudzoka
UYE ONA mukazviitazve.
ANOBATSIRA UPENYU HWAKO ADVENTURES,
NOT ZVINHU. UNE STORIES TO Pomerai
NOT nhumbi kuti ZVINORATIDZEI.
Miles chinotanga VASINA
CHINONZI UPENYU MUNOGONA A ushingiwo
Adventure OR HAPANA
Yaro nani ONA CHINHU
PANE imwe nguva kupfuura kunzwa ABOUT IT
Kuseka harichinji nokufamba kwenguva, fungidziro haana ZERA
AND kurota NOKUSINGAPERI.
Uye ndinofunga nechomumwoyo ... CHII
Uri chete dzinoshambira kure
& NbspFROM A AKANAKA Mood
Dixie Orange County ndomumwe yakanakisisa nzvimbo kugara mukati 15 maira nharaunda pamusoro Disneyland nezvimwe akakurumbira zvinokwezva hafu mutengo. Uyai vane 5-nyeredzi ruzivo pamusoro 3-nyeredzi bhajeti. Hauzombozvidembi izvozvo.
Rooms uye Inn
Ungave uri vebato 2 pamusoro kudanana uchapukunyuka, kana mhuri 5 pamusoro mukuru Disney yezororo, tine nzvimbo imi. Sarudza chimwe yedu yatainge tabva kugadziridza Inn kuti zvakanakisisa akakubatira vako vaifamba zvido.
Kana zviri kureva kuenda nokuda kuzodya, kuronga chokufambisa wako, kana chete kukwazisa imi achinyemwerera apo, redu 24 awa mberi dhesiki mudonzvo akagadzirira kuita kugara kwako sezvo nyore uye zvinonakidza sezvinobvira.
pakupedzisira isu chete kudemba
mikana hatina kutora
Nhoroondo Pfupi pamusoro
The Dixie muchiso ndiyo nomutero nehanzvadzi mbiri mumwe wechitatu, Dixie, ane upenyu richivezwa hupfupi zvikuru zvakare nokukurumidza nomutyairi akadhakwa. Achitarira kurichinja munhu akaipa rive zvakanaka, hanzvadzi mbiri kupona akasika hôtel rake zita rinosanganisa musimboti ani Dixie aiva ... aizvininipisa, classy, ​​unyanzvi, zvakatipoteredza ndazviziva, tsitsi, akanyorova uye naizvozvo zvakawanda.
Discover hotera vedu
FREE kupaka mavara
Executive King - Mwero kubva $ 59.00 / usiku
Double Queen - Mwero kubva $ 69.00 / usiku
Find Dixie Orange County raMwari pamusoro
Zvivako & Services
Room Service (zvishoma)
Safe Deposit Box (kumberi dhesiki)
Firiji & microwave
Dixie Orange County raMwari pamusoro
Unoda perks sewewo imi vanoda kufamba? Saka, tarirai hapana mberi! Nakidzwa discounted rate anosvika 15% - kushandiswa kusimudzirwa remitemo MEMBER15 apo Réservation kamuri rako kure yedu yatainge tabva kugadziridza makamuri uye Inn pano pana Dixie Orange County pamwe vakasarudzwa asaita izvi:
-AAA Nhengo dhisikaundi
A paine ID uye nhengo kadhi waida pamusoro cheki-kuti vagamuchire dhisikaundi. Limited kuwanikwa.
Dixie Orange County anoda kuti uve nechokwadi iwe nemhuri yako kuwana chete prices huru kuti iwe uwane paIndaneti kana iwe bhuku zvakananga kubudikidza nesu uye nokuponesa 10%. Mugshot yakananga zviri nyore uye nyore uye ane hapana mumwe zvakavanzika yechikoro kunodiwa kuburikidza bato rechitatu nzvimbo. Just tinya bhatani pazasi uye Save 10%!
Reservations All dzinosanganisira:
Valid nokuti paIndaneti ndishushikane chete. Shandisa Kukwidziridzwa Bumbiro DIRECT10 apo achiita kuchengetedza wako.
Itai gore rino ane zvimwezvo kudanana mumwe chete wenyu chaiye munhu uye bhuku redu Romantic Getaway Package. Available mwedzi yose March. Nakidzwa Champagne, Chocolates, uye kudya pamubhedha mune imwe yedu unodziya yatainge tabva kugadziridza Mambo Inn panguva Dixie Orange County. Rates kutanga $ 99 / usiku uye anosanganisira:
-Cozy King Suite zvakakwana ikodzere 2
-Chinhu Bottle pamusoro Champagne
-Breakfast Pamubhedha mbiri
(1 mangwanani raunenge)
-1pm Late Check-panze
Chii vanhu vachiti nezvedu
"Akanga ari vakabatisisa bhajeti pagungano mumhanzi uye aida nzvimbo kugara kuti akanga asiri kuenda aputse. Ndaisava, kufara chaizvo kana taifamba mukamuri kwedu mutengo. Ndakafunga kuti chaizova yechinyakare, asi chakagadziriswa, ano uye yakachena. Ndakashamiswa !! "
"Friendly vatengi kubudikidza mberi dhesiki vashandi, mukono nehadzi. Vakaita ndinzwe sokuti kumba ndaiva. "
"Nzvimbo iyi yaiva zvikuru !! Yatainge tabva kugadziridza, makuru mibhedha, magumbeze, nezvifukidzo ... itsva zvose! Kamuri yaiva vadiki yakashongedzwa uye makuru kwazvo. Bathroom squeaky akachena, zii chimbuzi. Mijenya pamusoro kupaka. Very yakanyarara nzvimbo. Machira akanga dema kunze mhando. "
akachena Very uye akanyarara. Pedyo vose zvinokwezva, Disneyland uye Beach. Ungada zvikuru kuvakurudzira nzvimbo iyi wose kutsvaka zvakanaka nzvimbo zvakasimba bhajeti. Karl akaita ane basa zvinodiwa angu ose uye aiva nehanya chaizvo. Achaita zvachose kushanyira pano zvakare! Zvakanaka patsva makamuri vane microwave uye firiji. "
"Ndinokutendai chinoshamisa zvechokwadi kugara! mutsa wenyu rakanyatsojeka hunoshamisa. Taive zvose zvataida pedyo napedyo, nzvimbo kudya, Knott kwakaita Berry Farm uye Disneyland. Vana vakanga rimwe bhomba kutamba padziva matoyi. Tichava shure zvakare !! "
TEVEDZERA US on Facebook FOR Special Offers
Unogona YEDU ZVISHANU Star SERVICE AT WEDU ZVITATU Star HANZVADZI NDERA kuHollywood, CALIFORNIA. DZIDZA ZVAKAWANDA pazasi Chebhuku ROOM WAKO TODAY!
Forgot Password? (Pedyo)
Unoda Login? (Pedyo)